ချစ်တင်းနှောနေစဉ်မှာ သင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကို ဘယ်လိုမြှင့်တင်မလည်း
May 23, 2018 By Buzz Myanmar News in အချစ်ဆိုင်ရာ, အမျိုးသမီးဆိုင်ရာ, အမျိုးသားဆိုင်ရာ Tags: ပန်းတိုင်, လိင်အဂါ, အမျိုးသမီး
ဒီအချက်အလက်တွေကို သင့်အနေနဲ့ လိုက်နာမယ်ဆိုရင်တော့ သင့်ရဲ့ အိပ်ခန်းတွင်းစွမ်းဆောင်နိုင်ရည်ဟာ တိုးတက်လာမှာ ဖြစ်ပြီး သင်ရော သင့်အဖော်ရော သာယာကြည်နူးမှုကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်စေမှာပါ ။လူတိုင်းဟာ ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ အိမ်ထောင်ရေးကို ပိုင်ဆိုင်လိုကြပါတယ်။ သို့ပေမယ့်လည်း များစွာသော အမျိုးသားတွေဟာ စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့်သော်လည်းကောင်း အခြားသော အကြောင်းကြောင်းတွေကြောင့် မိမိရဲ.ဆက်ဆံဖော် အမျိုးသမီး မပြီးခင်မှာ ပြီးဆုံးခြင်းကိုရောက်ရှိတက်တာမို့ အိမ်ထောင်ရေး သာယာမှုကို အထိုက်အလျှောက် ထိခိုက်စေပါတယ်
။ အမျိုးသားရဲ. လိင်စွမ်းဆောင်ရည် ကျဆင်းနေခြင်းကို ကုစားပေးနိုင်မယ့် နည်းလမ်းကောင်း aတွဟာ တကယ်ပဲရှိနေပါတယ် ။ ချစ်တင်းနှောစဉ်ကာလမှာ သတိထားလိုက်နာသင့်တဲ့ အချက်တွေနဲ့ နေ့စဉ်လူနေမှုဘဝပုံစံကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲသင့်တဲ့ အရာတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် ။ ဒီအချက်အလက်တွေကို သင့်အနေနဲ့ လိုက်နာမယ်ဆိုရင်တော့ သင့်ရဲ့ အိပ်ခန်းတွင်းစွမ်းဆောင်နိုင်ရည်ဟာ တိုးတက်လာမှာ ဖြစ်ပြီး သင်ရော သင့်အဖော်ရော သာယာကြည်နူးမှုကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်စေမှာပါ ။
ချစ်မှုပြုရာမှာ စိတ်လှုပ်ရှားစွာနဲ့ အမြန်မပြုလုပ်သင့်ပါဘူး ။ သင့်ရဲ.လှုပ်မရှားမှုကို ဖြည်းဖြည်း နဲ့ ပုံမှန်ပဲ လုပ်ဆောင်သင့်ပြီး စိတ်အားတက်ကြွလွန်းခြင်းကို ထိန်းထားသင့်ပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ သင့် အဖော် ကို စိတ်ပိုမိုတက်ကြွစေရန် နှိုးဆွလှုံဆော်ခြင်းမျိုးတွေကို ပြုလုပ်ပေးရပါမယ်။ သင့်အဖော်ဟာလည်း ခရီးဆုံး ပန်းတိုင် ကို ရောက်တော့မယ်ဆိုရင်တော့ သင့်အနေနဲ့ ချစ်မှုပြုခြင်း အရှိန်ကို မြှင့်တင်ပြီး အတူတကွ ပြီးဆုံးနိုင်ပါတယ်။
သင့်အနေနဲ့ “7 and 9” technique ကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ် ။ သင့်အဖော်ကို ခရီးဆုံးပန်းတိုင်ရောက်ရှိနိုင်ရန် သင်က နှိုးဆွနေပေးပြီး ဆက်ဆံခြင်းကို “အမြန် ခုနှစ်ကြိမ် ၊ အနှေး ကိုးကြိမ် ” အစဉ်အတိုင်း ပြုလုပ်ပေးခြင်းဟာလည်း အထောက်အကူ ဖြစ်စေမှာပါ။
ပုံစံ အနေအထား ပြောင်းကြည့်ပါ
ချစ်မှုပြုစဉ်မှာ သင့်ရဲ. ခွန်အား ကို ချွေတာနိုင်ဖို့ ၊ ကြွက်တက်ညောင်းညာခြင်းကို မဖြစ်စေဖို့ နဲ့ အချိန်မတိုင်ခင် စောလျှင်စွာ ပြီးဆုံးခြင်းမဖြစ်စေဖို့ အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းတွေထဲက တစ်ခုကတော့ ဆက်ဆံမှုပုံစံကို မကြာခဏ ပြောင်းပေးခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ ပြီးဆုံးခြင်းဖြစ်တော့မယ်လို့ ခံစားလာရရင် ဆက်ဆံနေပုံကို ပြောင်းလဲတာဖြစ်စေ ဆက်ဆံမှုကို ခဏရပ်နားတာဖြစ်စေ ပြုလုပ်ပေးရပါမယ် ။ ယခုလိုပြုမူနေခြင်းအားဖြင့် သင့်အနေနဲ့ ပိုမို စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းတဲ့ ဆက်ဆံမှုကို ရရှိစေမှာဖြစ်ပြီး အချိန်ကြာမြင့်စွာလည်း သင့်အဖော်နဲ့ အတူတူနေနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သင်ဟာ ခရီးဆုံးပန်းတိုင်ရောက်ရှိတော့မယ်လို့ ခံစားရပြီ သို့တည်းမဟုတ် အလွန်ကို မောပန်းနေပြီဆိုရင်တော့ မိနစ်အနည်းငယ်လောက် အနားယူသင့်ပါတယ် ။ ထိုသို့ ခဏနားနေစဉ်မှာ သင့်အဖော်ရဲ. စိတ်ဓါတ်တက်ကြွနေမှု မရပ်တန့်သွားဖို့ အရေးကြီးပါတယ် ။ သင့်အနေနဲ့ သင့်အဖော် ဆက်လက်ပြီး စိတ်အားထက်သန်မှု ရှိနေစေဖို့အတွက် သင့်အဖော်ကို ညင်သာစွာ ပွတ်သပ်ပေးခြင်း ၊ နမ်းရှုံပေးခြင်း ၊ ညစ်တီးညစ်ပတ် လျှောက်ပြောခြင်း တို့ ပြုလုပ်ပေးရပါမယ် ။ ဒါမှလည်းပဲ သင်အနားယူပြီးချိန်မှာ မပြီးဆုံးသေးတဲ့ သင်တို့ရဲ. ချစ်ခြင်းပန်းတိုင်ဆီကို အတူတကွ ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
နမ်းရှုံသုံးသပ်ခြင်းကို အဓိကထား လုပ်ဆောင်ပါ
တကယ်တော့ ချစ်တင်းနှောခြင်း ဆိုတာဟာ အမျိုးသား နဲ့ အမျိုးသမီး လိင်အဂါ င်္စပ်နှစ်ခု နှီးနှောခြင်း ဆိုတဲ့ အခြေအနေတစ်ရပ်ထက် ပိုပြီး လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ် ။ သင့်အဖော်နဲ့ ချစ်မှုပြုခြင်းကို အချိန်ကြာကြာ ပြုလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင် သင့်အဖော်ကို ညှင်သာစွာ ပွတ်သပ်ပေးခြင်း ၊ နမ်းရှုံခြင်း ၊ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာများ ပြောပေးခြင်း စသဖြင့် ပြုလုပ်ပေးရပါမယ် ။ ထိုကဲ့သို့ ပြုလုပ်ပေးခြင်းအားဖြင့် သင့်အဖော်ဟာ သင့်ထက်အရင် တစ်ကြိမ် သို့တည်းမဟုတ် တစ်ကြိမ်ထက်ပိုသော ခရီးဆုံးပန်းတိုင်ကို ရောက်ရှိစေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် ။
ကွန်ဒုံး ကိုအသုံးပြုခြင်းဟာ အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးကြား ထိတွေ့ရာမှာ ပုံမှန်လောက် မသိသာတာကြောင့် အချိန်ခဏလေးနဲ့ ခရီးဆုံး ပန်းတိုင် ကို အလွယ်တကူမရောက်ရှိနိုင်အောင် ထောက်ကူပေးနိုင်ပါတယ် ။ ကွန်ဒုံးရွေးချယ်ရာမှာတော့ သင့်အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး ထူထဲတဲ့ ကွန်ဒုံး မျိုးကို ရွေးချယ်မလား ၊ ပါးလွှာတဲ့ ကွန်ဒုံးကိုရွေးချယ်မလားဆိုတာ ဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Credit : Buzzyv
ခဈြတငျးနှောနစေဉျမှာ သငျ့စှမျးဆောငျရညျကို ဘယျလိုမွှငျ့တငျမလညျး
ဒီအခကျြအလကျတှကေို သငျ့အနနေဲ့ လိုကျနာမယျဆိုရငျတော့ သငျ့ရဲ့ အိပျခနျးတှငျးစှမျးဆောငျနိုငျရညျဟာ တိုးတကျလာမှာ ဖွဈပွီး သငျရော သငျ့အဖျောရော သာယာကွညျနူးမှုကို ပိုငျဆိုငျနိုငျစမှောပါ ။
လူတိုငျးဟာ ပိုမိုကောငျးမှနျတဲ့ အိမျထောငျရေးကို ပိုငျဆိုငျလိုကွပါတယျ။ သို့ပမေယျ့လညျး မြားစှာသော အမြိုးသားတှဟော စိတျဖိစီးမှုကွောငျ့သျောလညျးကောငျး အခွားသော အကွောငျးကွောငျးတှကွေောငျ့ မိမိရဲ.ဆကျဆံဖျော အမြိုးသမီး မပွီးခငျမှာ ပွီးဆုံးခွငျးကိုရောကျရှိတကျတာမို့ အိမျထောငျရေး သာယာမှုကို အထိုကျအလြှောကျ ထိခိုကျစပေါတယျ။ အမြိုးသားရဲ. လိငျစှမျးဆောငျရညျ ကဆြငျးနခွေငျးကို ကုစားပေးနိုငျမယျ့ နညျးလမျးကောငျးတှဟော တကယျပဲရှိနပေါတယျ ။ ခဈြတငျးနှောစဉျကာလမှာ သတိထားလိုကျနာသငျ့တဲ့ အခကျြတှနေဲ့ နစေ့ဉျလူနမှေုဘဝပုံစံကို ပွုပွငျပွောငျးလဲသငျ့တဲ့ အရာတှကေို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ ။ ဒီအခကျြအလကျတှကေို သငျ့အနနေဲ့ လိုကျနာမယျဆိုရငျတော့ သငျ့ရဲ့ အိပျခနျးတှငျးစှမျးဆောငျနိုငျရညျဟာ တိုးတကျလာမှာ ဖွဈပွီး သငျရော သငျ့အဖျောရော သာယာကွညျနူးမှုကို ပိုငျဆိုငျနိုငျစမှောပါ ။
အိပျခနျးထဲတှငျ လိုကျနာရနျ နညျးလမျးမြား
ခဈြမှုပွုရာမှာ စိတျလှုပျရှားစှာနဲ့ အမွနျမပွုလုပျသငျ့ပါဘူး ။ သငျ့ရဲ.လှုပျမရှားမှုကို ဖွညျးဖွညျး နဲ့ ပုံမှနျပဲ လုပျဆောငျသငျ့ပွီး စိတျအားတကျကွှလှနျးခွငျးကို ထိနျးထားသငျ့ပါတယျ။ သငျ့အနနေဲ့ သငျ့အဖျောကို စိတျပိုမိုတကျကွှစရေနျ နှိုးဆှလှုံဆျောခွငျးမြိုးတှကေို ပွုလုပျပေးရပါမယျ။ သငျ့အဖျောဟာလညျး ခရီးဆုံးပနျးတိုငျကို ရောကျတော့မယျဆိုရငျတော့ သငျ့အနနေဲ့ ခဈြမှုပွုခွငျး အရှိနျကို မွှငျ့တငျပွီး အတူတကှ ပွီးဆုံးနိုငျပါတယျ။
သငျ့အနနေဲ့ “7 and 9” technique ကို အသုံးပွုနိုငျပါတယျ ။ သငျ့အဖျောကို ခရီးဆုံးပနျးတိုငျရောကျရှိနိုငျရနျ သငျက နှိုးဆှနပေေးပွီး ဆကျဆံခွငျးကို “အမွနျ ခုနှဈကွိမျ ၊ အနှေး ကိုးကွိမျ ” အစဉျအတိုငျး ပွုလုပျပေးခွငျးဟာလညျး အထောကျအကူ ဖွဈစမှောပါ။
ပုံစံ အနအေထား ပွောငျးကွညျ့ပါ
ခဈြမှုပွုစဉျမှာ သငျ့ရဲ. ခှနျအားကို ခြှတောနိုငျဖို့ ၊ ကွှကျတကျညောငျးညာခွငျးကို မဖွဈစဖေို့ နဲ့ အခြိနျမတိုငျခငျ စောလြှငျစှာ ပွီးဆုံးခွငျးမဖွဈစဖေို့ အကောငျးဆုံး နညျးလမျးတှထေဲက တဈခုကတော့ ဆကျဆံမှုပုံစံကို မကွာခဏ ပွောငျးပေးခွငျးပဲ ဖွဈပါတယျ။ သငျ့အနနေဲ့ ပွီးဆုံးခွငျးဖွဈတော့မယျလို့ ခံစားလာရရငျ ဆကျဆံနပေုံကို ပွောငျးလဲတာဖွဈစေ ဆကျဆံမှုကို ခဏရပျနားတာဖွဈစေ ပွုလုပျပေးရပါမယျ ။ ယခုလိုပွုမူနခွေငျးအားဖွငျ့ သငျ့အနနေဲ့ ပိုမို စိတျဝငျစားဖှယျကောငျးတဲ့ ဆကျဆံမှုကို ရရှိစမှောဖွဈပွီး အခြိနျကွာမွငျ့စှာလညျး သငျ့အဖျောနဲ့ အတူတူနနေိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။
သငျဟာ ခရီးဆုံးပနျးတိုငျရောကျရှိတော့မယျလို့ ခံစားရပွီ သို့တညျးမဟုတျ အလှနျကို မောပနျးနပွေီဆိုရငျတော့ မိနဈအနညျးငယျလောကျ အနားယူသငျ့ပါတယျ ။ ထိုသို့ ခဏနားနစေဉျမှာ သငျ့အဖျောရဲ. စိတျဓါတျတကျကွှနမှေု မရပျတနျ့သှားဖို့ အရေးကွီးပါတယျ ။ သငျ့အနနေဲ့ သငျ့အဖျော ဆကျလကျပွီး စိတျအားထကျသနျမှု ရှိနစေဖေို့အတှကျ သငျ့အဖျောကို ညငျသာစှာ ပှတျသပျပေးခွငျး ၊ နမျးရှုံပေးခွငျး ၊ ညဈတီးညဈပတျ လြှောကျပွောခွငျး တို့ ပွုလုပျပေးရပါမယျ ။ ဒါမှလညျးပဲ သငျအနားယူပွီးခြိနျမှာ မပွီးဆုံးသေးတဲ့ သငျတို့ရဲ. ခဈြခွငျးပနျးတိုငျဆီကို အတူတကှ ဆကျလကျခြီတကျနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။
နမျးရှုံသုံးသပျခွငျးကို အဓိကထား လုပျဆောငျပါ
တကယျတော့ ခဈြတငျးနှောခွငျးဆိုတာဟာ အမြိုးသားနဲ့အမြိုးသမီး လိငျအဂါင်ျစပျနှဈခု နှီးနှောခွငျး ဆိုတဲ့ အခွအေနတေဈရပျထကျ ပိုပွီး လုပျဆောငျနိုငျပါတယျ ။ သငျ့အဖျောနဲ့ ခဈြမှုပွုခွငျးကို အခြိနျကွာကွာ ပွုလုပျနိုငျဖို့အတှကျဆိုရငျ သငျ့အဖျောကို ညှငျသာစှာ ပှတျသပျပေးခွငျး ၊ နမျးရှုံခွငျး ၊ စိတျလှုပျရှားဖှယျရာမြား ပွောပေးခွငျး စသဖွငျ့ ပွုလုပျပေးရပါမယျ ။ ထိုကဲ့သို့ ပွုလုပျပေးခွငျးအားဖွငျ့ သငျ့အဖျောဟာ သငျ့ထကျအရငျ တဈကွိမျ သို့တညျးမဟုတျ တဈကွိမျထကျပိုသော ခရီးဆုံးပနျးတိုငျကို ရောကျရှိစနေိုငျမှာဖွဈပါတယျ ။
ကှနျဒုံးကိုအသုံးပွုခွငျးဟာ အမြိုးသားနဲ့အမြိုးသမီးကွား ထိတှရေ့ာမှာ ပုံမှနျလောကျ မသိသာတာကွောငျ့ အခြိနျခဏလေးနဲ့ ခရီးဆုံးပနျးတိုငျကို အလှယျတကူမရောကျရှိနိုငျအောငျ ထောကျကူပေးနိုငျပါတယျ ။ ကှနျဒုံးရှေးခယျြရာမှာတော့ သငျ့အခွအေနပေျေါမူတညျပွီး ထူထဲတဲ့ ကှနျဒုံးမြိုးကို ရှေးခယျြမလား ၊ ပါးလှာတဲ့ ကှနျဒုံးကိုရှေးခယျြမလားဆိုတာ ဆုံးဖွတျရမှာဖွဈပါတယျ။
Credit : Buzzy